Suuqa Android ayaa loo cusbooneysiiyay noocyada Android 2.1 | Androidsis
Suuqa Android ayaa loo cusbooneysiiyay noocyada Android 2.1
Google, sida la tilmaamay waqti hore, waxay bilawday inay cusbooneysiiso barnaamijyadeeda iyadoon loo eegin noocyada nidaamka qalliinka mana sii sugi doonno inta la soo saarayo noocyada cusub ee Android maxaa loogu Gmail, Khariidadaha Google ama Suuqa Android laftiisa waa la cusbooneysiiyey.
Khariidadaha Google horay ayaan u sameeyay iyo aniga Gmail wuxuu bilaabay inuu sameeyo waxyar kahor, hadda waa markiisa mid aad u Suuqa Android. Maahan wax cusbooneysiin ah dhammaan boosteejooyinka ama dhammaan noocyada jira, waa cusbooneysiin gaareysa milkiilayaasha boosteejooyinka ku shaqeeya Android 2.1. Waxyaabaha cusub waxaa ka mid ah, waxaa la soo sheegay in hadda ka dib cusbooneysiinta ay sidoo kale suurtagal tahay in la calaamadeeyo codsiyada la rakibay si otomaatig ah loo cusbooneysiiyo, shaqeynta taas oo ah, sida aad xusuusan doontid, kaliya waxay laheyd boosteejooyinka socda Android 2.2. Sida muuqata dhibaatooyinka qaar waxaa laga diiwaan geliyaa codsiyada lacag bixinta marka la calaamadeynayo inay si otomaatig ah u cusbooneysiiyaan.
Intaa waxaa sii dheer, cusbooneysiintani kama muuqanayso terminaalka nooc kasta oo ogeysiis ah oo lagu rakibo, laakiin si toos ah ayey u cusbooneysiineysaa asalka iyada oo aan la ogeysiin isticmaalaha. Nooca ah Suuqa cusub ee Android waa lambar 2007.
Waa in laxasuustaa hadiiba qof uusan wali ogayn in barnaamijyadan Google, sida Khariidadaha, Gmail, Youtube, Android Market, Gtalk, aysan ka tirsanayn nidaamka qalliinka oo ay iska leeyihiin Google laakiin waxay ka faa'iideysatay nidaamka cusbooneysiinta si la mid ah ku samee dhammaan ama qayb ka mid ah codsiyadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Suuqa Android ayaa loo cusbooneysiiyay noocyada Android 2.1
Unoqueva .... dijo
Waxaan leeyahay sixir leh 1.6 sidoo kalena waa la cusbooneysiiyay
Ku jawaab Unoqueva ....
Waxaan sidoo kale arkay inay dhigeen aalad suuqa ah .. laakiin ma lahan wax shaqo ah oo faa'iido leh .. ugu yaraan aniga ayay ila tahay… maxaad u malayn?
Ku jawaab nahueleo
Waxaan kujirey guul muhiim ah 2.1 waxaan kusii wadaa suuqa caadiga ah, muxuu noqon doonaa?
Ku jawaab cadaan
Waxaan ku sii wadaa qaabkii hore ee Suuqa ee ku saabsanaa 'HTC Legend' ee aan wato 'Android 2.1'.
Sidoo kale waxaan hayaa sixir leh p *** 1.6 iyo Suuqa sidoo kale waa la cusbooneysiiyay, iyada oo "digniin la'aan" aysan jirin. Marka kaliya maaha 2.1
Arinku waa qosol!
Waxaan haystaa geesiga bilaashka ah ee htc 2.1 wax cusboonaysiin ahna uma muuqdo gmail ama suuq ama na!
Aniga Antony midna
Doqon su'aal, sidee ku ogaan kartaa in la cusbooneysiiyay iyo in kale? Sidee loo ogaadaa nooca aan hayno?
Haddii aad aadid suuqa qaybta aad soo degsatay oo aad gasho mid aad rakibtay, waad arki doontaa inaad ikhtiyaar u leedahay inaad si otomaatig ah u cusbooneysiiso arjiga.
dagaalladii oo dhan dijo
Laakiin sidee loo cusbooneysiiyaa suuqa? ama ay kuugu timaado sida codsiyada kale, calanka "wuxuu leeyahay codsiyo cusub !!"
Ku jawaab allwars
duudduuban 98 dijo
Waxaan cusbooneysiiyay shalay wiilkeyga ericsson x10 mini pro suuqana wali waa isku mid inkasta oo markii la cusbooneysiiyey markii ugu horeysay ee aan daqiiqad yar galo aan helay nashqadda cusub laakiin markii dambe way baxday
Waxaan cusbooneysiiyay barnaamijkeyga xperia mini pro shalay, mabda 'ahaan wax walbo waa hagaagsanaa laakiin markaa suuqii baa igu dhacay mana sii dejinayo wax dambe, waxaan ka soo degsadaa webka dhib la'aan laakiin suuqa kama sii jiro ...
Iima cusbooneysiineyso. Maxaan sameeyaa fadlan ka jawaab
Ku jawaab juanikiller
StarTalking, fariimo qoraal ah ugu sheeg Android-kaaga